Golaha Shacabka oo maanta yeelanaya kulankiisii 31-aad oo 9 jeer baaqday – Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa, markii ugu horeysay, maanta kulmaya, tan iyo shantii bishan oo ah markii ugu dambeysay ee uu Goluhu kulmo. Kulanka maanta waxa uu leeyahay xiisa gaar ah, maxaayeelay waxaa lagu wada in lagu meel-mariyo ama uu Goluhu uga doodo Hindisaha Miisaaniyadda 2019-ka, oo ay ka harsan tahay laba maalin oo kaliya.
Haddii ay dhacdo inuu Goluhu ka doodo Miisaaniyaddaas, waxay taasi suuragaleysaa iyada oo uusan Goluhu meel-marin Xisaab-xirka Miisaaniyadda 2018-ka, oo War-bixin uu Guddiga Maaliyadda ee Goluhu ka keenay 24-ka bishii hore ay kala geysay Golaha iyo Guddoonkiisa. War-bixintaas waxay Xukumadda iyo Maamulka Gobolka Banaadir ku eedeeneysay lunsasho lacag ka badan $40 milyan.
24-kii Nofeember kadib, Goluhu waxa uu kulmay hal maalin oo kaliya, waxaana kulanka maanta uu noqonaya kii labaad tan iyo 24-kii bishii hore, taasna waxay ka dhigeysaa inuu Goluhu baajiyey ugu yaraan 15 kulan oo ay ahayd inuu ku qabto shaqo intii u dhaxeysay 26-Nofeember-27-Diseembar.
Sidoo kale, Golaha shacabku muusan soo xisaab-xirin Miisaaniyaddii 2017, waxayna taas noqoneysaa in uu sanadkii labaad ka doodayo Miisaaniyadda sanadka xiga, iyada oo aan la ansixin Miisaaniyadda 2017 iyo 2018. Daruufo u badan khilaaf iyo waqti ciriiri ah oo dambe oo laga shaqa-gelayo Miisaaniyadaha ayaa la rumeysan yahay iney yihiin sababaha ugu weyn ee dib u dhaca ansixinta iyo xisaab-xirka Miisaaniyadaha Dowladda.
Kulanka Golaha ee maanta waxaa Miisaaniyadda 2019-ka hor keeni doona Guddigia Maaliyadda ee Golaha, oo lahaan doona Guddoon cusub, kadib markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabku ka saaray Xubinnimadoodii iyo Guddoonkoodiba hogaankii hore ee uu Guddigaas lahaa.
Kalfadhi wuxuu si toos ah kuugu soo tabin doonaa waxa ka dhex dhacay Xarunta Golaha Shacabka ee ku xirnow bartiisa Facebook oo ah Kalfadhi iyo bartiisa Twitter oo ah @Kalfadhi_SO.